မျက်လုံးသည်စာလုံးပေါင်းစစ်ဆေးသည့်အရာရှိသည် Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, နိုဝင်ဘာလ 11, 2008 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ယခုအပတ်ငါပဲဖတ်ပြီးစီးခဲ့သည် မိခင်ဘာသာစကားကိုမှန်ကန်ခြင်း - အင်္ဂလိပ်စာမှသည်အင်္ဂလိပ်စာလုံးပေါင်း၏ရှုပ်ထွေးသောအင်္ဂလိပ်စာလုံးပေါင်းသို့အီးမေးလ်သို့ပို့သည် by David Wolman.
orthography နှင့် etymology ဆိုသည်မှာမည်သည့်အရာဖြစ်သည်ကိုသင်မသိနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်သဒ္ဒါနှင့်စာလုံးပေါင်းကျွမ်းကျင်ကြောင်းသိသော်လည်းဤစာအုပ်ကကျွန်ုပ်၏စွမ်းရည်နှင့် ပတ်သက်၍ အတော်လေးသက်သာစေခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတွင်သန်းပေါင်းများစွာသောစကားလုံးများရှိသော်လည်း၊ အလယ်တန်းအထက်တန်းအောင်မြင်သူ ၆၀၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။ အမှန်မှာကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မိခင်ဘာသာစကားတွင်မည်သည့်စကားလုံးများပါဝင်သည်ကိုသဲသဲကွဲကွဲမသိရှိပါ။
ငါတို့ဘာသာစကားသည်အသံထွက်မှားသောဘာသာစကားဖြစ်ပြီးသင်ယူရန်မဖြစ်နိုင်လောက်သောဘာသာစကားဖြစ်သည်။ အချို့သောရှေးရှေးများကစာလုံးပေါင်းမှားခြင်းသည်မသိခြင်း၏လက္ခဏာဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော်ရှိတ်စပီးယားကိုယ်တိုင်သည်သူမနှစ်သက်သောစကားလုံးများကိုတီထွင်ရန်နှင့်စာလုံးပေါင်းမှားရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ သူကစာလုံးတွေနဲ့စကားလုံးတွေကိုပန်းပုဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ရွှံ့စေးနဲ့တူတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ဒီဘလော့ဂ်ပေါ်မှာငါ့ကိုယ်ပိုင်အနုပညာစကားလုံးတွေထည့်လိုက်ရင်ရှေးရှေးတွေကငါ့ကိုမကျေမနပ်ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်။
ထောင်စုနှစ်သစ်တစ်ခုသို့ကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းရွှေ့သွားသောအခါမည်သည့်ပုံစံဖြင့်အဘိဓာန်တွင်မှမည်သည့်အခါမျှဘယ်သောအခါမှရောက်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်သောနည်းပညာနှင့် ပတ်သက်၍ စကားလုံးများပြောဆိုပြောဆိုခြင်းကိုတွေ့ရသည်။ အဘိဓာန်ထုတ်ဝေသူများပင်၎င်းသည်အဘယ်အရာပြုလုပ်သည်၊ မည်သည့်အရာကဘာလဲဆိုတာကိုသဘောမတူနိုင်ပါ။
ငါတို့သွားသည်နှင့်အမျှစကားလုံးအသစ်များကိုတီထွင်နေသည်ဟုသင်မယုံလျှင်သင်အချိန်ကိုက်ပြန်ကြည့်ဖို့လိုသည် OK…။ သို့မဟုတ်ပါက အိုကေ... ဒါမှမဟုတ်ဒါကဖြစ်ပါတယ် မှန်ပါတယ် or အိုကေ krereck။ စဉ်းစားကြည့်ပါ၊ သင်၏မြေးများသည် ၄ ​​င်းတို့နေ့စဉ်စကားဝိုင်းများဖြစ်သော rofl, lmao, asap, lol, ttfn ဖြစ်နိုင်သည်။
အဲဒါကိုမယုံဘူးလား ဘယ်လိုစကားလုံးကော ScubaSelf- ပါဝင်သောရေအောက်အသက်ရှူကိရိယာအတွက်အတိုကောက်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ဘယ်လိုလဲ ဘ‌‌လော့ခ်ထက်နည်းဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာဖြစ်ခဲ့သည်သော ဝဘ်မှတ်တမ်း! စကားလုံးနှင့်အတူဘလော့ဂါ, ဘလော့ဂ်, blogging နှင့် blogware လာကြပြီ။ ယနေ့ခေတ်တွင်အွန်လိုင်းတွင်ထုတ်လုပ်သောစကားလုံးများ၊ အတိုကောက်များ (သို့မဟုတ်) တိုတောင်းသောကုဒ်များကိုနိုင်ငံတကာတွင်အသုံးပြုသောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအချိန်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်ကြော်ငြာနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာရန်မလိုအပ်ကြောင်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၌ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဂူဂဲလ်ကဲ့သို့ကုမ္ပဏီများ၊ iPhone ကဲ့သို့သောအရာများနှင့် Seesmic ကဲ့သို့သောကုန်ပစ္စည်းများအားလုံးအပြည့်အဝလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းအရာတွင်မတော်တဆမှားယွင်းစွာစာလုံးပေါင်းခြင်းများကိုသည်းမခံနိုင်ကြပါ။ ငါဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ထင်တယ်
လေယာဉ်လီကကျွန်မရဲ့ revue လေးကိုမှတ်တယ်
ဒါဟာငါ့ကိုဖြောင့်တစ် ဦး အလေးချိန်ပြောပြသည်။
ငါစာအုပ်တစ်အုပ်ကောက်ယူရန်သင့်အားတိုက်တွန်းပါသည်၊ ၎င်းသည်သမိုင်းတစ်လျှောက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်လမ်းလျှောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ စာဖတ်ခြင်းသည်အလွန်ပေါ့ပါးသော David ဖြစ်သည် ပို၍ ပင်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်မှာသူသည်သူပြောင်းလဲခဲ့သည့်နေရာများသို့သူကိုယ်တိုင်သွားရောက်လည်ပတ်စဉ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၏မူလအစအားလုံးကိုပြောပြခြင်းဖြစ်သည်။ အဲဒါပါ အရမ်းကောင်းတယ်!
အားလုံးပေးအချို့၊ အချို့ပေးအားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
12:2008 pm မှာနိုဝင်ဘာ 11, 01
Bill Bryson ရဲ့ အစောပိုင်းစာအုပ်နှင့် အမည်တူသည်။ Bryson ၏ မဆုတ်မနစ်သော အချက်အလက်များကို သင်နှင့်တွေ့သည်” ဟူသော အရေးအသားပုံစံကို သင်စိတ်မ၀င်စားပါက အခြားစာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်သည်။ Wolman ရဲ့ စာအုပ်ကို ကျွန်တော် မဖတ်ဖူးသေးတဲ့အတွက် ထပ်နေတာ ဘယ်လောက်ရှိမယ် မသိပါဘူး။
နိုဝင်ဘာလ 12 ရက် 2008 ခုနှစ် ညနေ 1:14 နာရီ
Dan ငါအဲဒါကိုစစ်ဆေးရပေမည်။ မနှစ်က ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး စာအုပ်တွေထဲက တစ်အုပ်ကတော့ Bill Bryson ရဲ့ A Short History of Nearly Everthing ပါ။
နိုဝင်ဘာလ 15 ရက် 2008 ခုနှစ် ညနေ 4:53 နာရီ
ဟုတ်တယ်၊ Short History က အဲဒါကိုဖြတ်ပြီး ပြေးတဲ့အခါ မိခင်ဘာသာစကားကို ကောက်ယူခဲ့တာ အတိအကျပါပဲ။